Ngwa nke ecommerce na ngalaba egwuregwu | ECommerce ozi ọma
Jose Ignacio | | eCommerce, StartUps na ndi oru itumgbere ahia
Azụmahịa elektrọnik bụ otu n'ime ebe ụlọ ọrụ na-ekenye nnukwu mbọ na akụ na ụba yana ndị nsogbu azụmahịa metụtara egwuregwu dị ezigbo mkpa. N'ọnọdụ ọ bụla, na mpaghara egwuregwu, ọganiru ya agaala na afọ abụọ gara aga ebe ọ bụ na o ruru ngbanwe zuru oke nke nde euro 418, kedu ihe a 6 % karịa na nkeji iri na ise gara aga, dị ka data kachasị ọhụrụ nke National Markets and Competition Commission (Cnmc) nyere.
N'ime usoro a, ọ kwesịrị iburu n'uche na ndị ọrụ na-azụta ntanetị na-aga 5,8 ugboro kwa ọnwa na saịtị egwuregwu ecommerce; pasent na afọ gara aga bụ 4,9 na nke ahụ dị anya site na nleta izugbe ịzụta, nke bụ 54,5 ugboro kwa ọnwa. N'ihe banyere ọtụtụ ụdị, ugboro bụ 35 ugboro n'ọnwa na n'ihe banyere ejiji, 15,5.
Nke a na - eduga anyị inyocha ngalaba ebe ụwa nke egwuregwu nwere ike ịmegharị maka ụlọ ahịa dijitalụ ma ọ bụ azụmaahịa. Enwere ọtụtụ nhọrọ dị adị ma n'ezie ọdịdị dị iche iche, dị ka anyị ga-ahụ n'okpuru. Beingbụ otu n'ime azụmaahịa azụmaahịa kachasị mkpa abanye na ecommerce n'oge a.
1 Ngalaba egwuregwu: uwe egwuregwu
2 Na gyms n'ịntanetị
3 Online ire nke egwuregwu ngwaahịa
4 Ndụmọdụ n'ịzụ ihe n'ịntanetị
5 Echiche ndị ọzọ gbasara azụmaahịa egwuregwu n'ịntanetị
Ngalaba egwuregwu: uwe egwuregwu
Nke a bụ ihe ngosi izizi nke ngalaba ahụ na-eweta n'ime ụwa dijitalụ na otu n'ime ihe kachasị ike enwere ike ịchọta n'oge a. N'ihi mgbawa nke ndị họọrọ maka ụfọdụ ọrụ metụtara mgbatị ahụ ma ọ bụ ụdị egwuregwu ọ bụla, ma onye ọ bụla ma otu. Ruo n'ókè ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ azụmahịa ndị a nọ n'elu ogo gbasara ịgba ụgwọ n'ịntanetị na Spain, dị ka ngalaba kachasị ọhụrụ si dị.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ọ dịkwa oke mkpa na n'ihi mmepe nke eCommerce, ndị na-eme egwuregwu na-enweta naanị nzụta nke ụdị isiokwu niile na mba na mba ụwa site na njikọ Internetntanetị. Inwe n'ime nkeji ole na ole ihe ndị ị chọrọ mgbe ịzụrụ uwe egwuregwu.
Na ngalaba dị na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche, dịka akpụkpọ ụkwụ, sweatshirts, t-shirts na a ọtụtụ ngwa na-eme egwuregwu site ugbu a gaa n'ihu. Na ọnụahịa ndị na-ebelata ma e jiri ya tụnyere ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụ nke ọdịnala. Site na ahia kọmputa nke na-eru oke oke.
Na gyms n'ịntanetị
Anyị enweghị ike ichefu mkpa ọrụ ahụ dị na mmepe nke ecommerce. Ọfọn, n'echiche a, a ghaghị imesi ya ike uru Iji malite mgbatị ahụ n'ịntanetị, ha dị iche iche, dịka ndị anyị ga-enye gị n'oge a:
Ogologo oge ga-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị ahịa buru ibu kwa afọ.
Ọnụahịa ndị ahụ ga-adị ala ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ọnụego ụlọ egwuregwu ọdịnala, ma nwekwuo ike iji bulie nkwalite.
Nnukwu ịba uru na akụrụngwa ya yana nke ahụ na-enye ndị ọrụ ohere site n'oge ahụ ohere ka ukwuu n'ịhọrọ egwuregwu ịme.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, enwere ihe ọzọ nke ị nwere ike ịbụ na ị mataghị na nke mejupụtara n'ịghọta na ndị na-ege ntị kewara na ọkwa a ga-eme ka ntụgharị na, yabụ, ahịa Yabụ, ị ga-enwe nnukwu ọhụhụ na azụmaahịa gị karịa n'ụdị ọdịnala ma ọ bụ ọdịnala ma nke a bụ uru doro anya maka ịhọrọ azụmaahịa nwere njirimara ndị a.
Online ire nke egwuregwu ngwaahịa
Omume na-arịwanye elu nke egwuregwu emeela kawanyewanye mkpa maka ịbawanye ngwongwo egwuregwu karịa ka ọ dị na mbụ. Site n'echiche, enweghi obi abụọ na nke a bụ ihe ọzọ nke niche azụmaahịa na-abata dịka ọ dị ugbu a. Site na ikike uto nke ndị na-enyocha ụlọ ọrụ na-ewere dị ka nnukwu elu. Na a obere akụrụngwa ịmalite ya na enwere ike ịhazi ya site na azụmahịa azụmaahịa karịa na ngalaba azụmaahịa ndị ọzọ.
N'aka nke ozo, ekwesiri ighota na ire ere ahia n'ahia na enye otutu ndi oru ohuru ahia otutu ohere. N'ime otu ihe ndị a na-egosi na anyị na-ekpughe n'okpuru:
All iche iche nke ngwa maka mmezi na management nke a ọma akụkụ nke egwuregwu-eme. Ha abụọ metụtara mmega ahụ nkịtị na maka nhazi ya ziri ezi.
Ngwa ndị dị na akwa akwa na nke ahụ erutela ike tupu ike na afọ ndị na-adịbeghị anya n'ihe gbasara mmasị nke ndị ọrụ n'onwe ha. Ha na-esitekwa na sweatshirts ọdịnala gaa na isiokwu ebe ịchekwa uwe egwuregwu na egwuregwu ọ bụla.
Egwuregwu egwuregwu dịgasị iche iche nke nwere njikọ pụrụ iche na njikwa nke ọrụ ahụ ndị a na-apụta n'oge na-adịbeghị anya n'ihi mkpa nke ndị na-eme ụdị egwuregwu.
Ndụmọdụ n'ịzụ ihe n'ịntanetị
Nbili nke ahụike, ịgba ọsọ na egwuregwu ndị yiri ya na-aghọ fashionable na-adịbeghị anya e jikọrọ na mmepe nke electronic azụmahịa, na-enwe a oké mmekọrịta ọ bụla ọzọ. E nwere ọtụtụ ndị na-adanye na weebụ na-achọ ọnụahịa kacha mma na uwe egwuregwu, ndị na-agba snịịka, wristbands maka iwere usu ma ọ bụ mgbakwunye mgbakwunye egwuregwu. Slọ ahịa nwere ike ire ngwaahịa ndị a niile ma ọ bụ, dịka ọ dị n'ọtụtụ ọnọdụ, ha nwere ọkachamara na otu n'ime ha yana ọbụlagodi ka onye kachasị ọdụ site na weebụsaịtị ha ma ọ bụ ajụjụ ajụjụ.
Iji mejuputa ụdị usoro azụmaahịa a, ọ bụ eziokwu na a ga-emerịrị usoro nke ihe achọrọ. Ebe ọ ga-adị ezigbo mkpa ka ị tinye ihe nke aka gị ka ị ghara ịlaghachi na usoro azụmaahịa ị kpebiri ịmalite site ugbu a gawa. Ruo na klas a nke ndị ọchụnta ego na mpaghara egwuregwu bụ na ị nwere ike ịhụ azụmahịa n'ịntanetị dị ka ohere azụmaahịa iji bulie ọrụ ọrụ gị. Site na onyinye ndị a anyị kpọtụrụ aha n'okpuru:
Ọnụahịa ndị kacha mma na ahịa, yana ezigbo ego na mbelata dị ka ọnụego mbụ nke ebupụtara site na ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụ karịa.
Mfe na ịdị mma iji zụta ihe site n'ụlọ ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ ebe onye ọrụ ma ọ bụ onye ahịa dị. N’oge ọ bụla n’ụbọchị, ọbụna ná ngwụsị izu ma ọ bụ n’abalị.
Fọrọ nke nta niile ụzọ ịkwụ ụgwọ nyeere na Internet ahịa na-akwado. Site na kredit omenala ma ọ bụ kaadị debit gaa sistemụ kachasị teknụzụ, dịka ịkwụ ụgwọ elektrọnik.
Mgbanwe iji jikwaa usoro nke ịzụrụ ihe ndị a na enwere ike ịhazi mmadụ iche dịka mkpa nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa n'onwe ha. Na uru nile nke ụdị arụmọrụ azụmahịa a.
Ọsọ iji kpochapụ ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ isiokwu metụtara ngalaba egwuregwu. Maka n'eziokwu, site na iji otu ịpị ị nwere ihe ịchọrọ naanị n'ime awa 48. Enweghị ọrụ azụmahịa a na-enwe mmetụta na-adịghị mma na nguzozi nke akaụntụ nchekwa gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ntụle, ị ga-enwe dị ịrịba ego na ahịa na-nyeere si dijitalụ nyiwe.
Na usoro ndị ọzọ nke ụkpụrụ, nke otu n'ime ha na-apụta na anyị na-egosi gị site ugbu a gaa n'ihu:
Ndị na-akwado egwuregwu na ndụ ahụike
Ọkachamma na ọrụ ndị ahịa
Kọwaa ahụmahụ onye ọrụ
Usoro dị irè ma dị irè
Dị iche iche nke ụdị na ngwaahịa
Lekwasị anya na nsonaazụ na ike n'ime nzukọ na otu
Ndi ochichi gbasasiri ike nke otu onye otu nwere
Echiche ndị ọzọ gbasara azụmaahịa egwuregwu n'ịntanetị
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, iji ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa ịntanetị ọkachamara na azụmaahịa a pụrụ iche ọ ga-ekwe omume ọ bụghị naanị too na usoro nke okporo ụzọ olu ọ ga-enyekwa ha ohere ịlaghachi na azụmaahịa ha. Nke a bụ akụkụ ọzọ nke ị kwesiri iburu n'uche site ugbu a gawa.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, otu ebumnuche bụ isi nke ụdị azụmaahịa dị n'ịntanetị bụ ịbawanye ahịa na e-Commerce. Ma obughi nani nke ahu, kamakwa iweputa uzo di nma na webata ma gosiputa ahia ahia, n’etiti ndi ozo. Ebe ọ ga-adị mkpa iji nyochaa na ọ dị mkpa karịa echiche ndị ọzọ eziokwu nke mebe ihe ohuru nnukwu ụlọ ahịa na ịchọta ọchụchọ, siri ike iji gụnye usoro ngwaahịa niile yana ọ bara uru.
Na njedebe, yana gbasara netwọọdụ ịzụ ahịa, mkpọsa dị iche iche mepụtara site na ibute ụzọ dị mkpa dabere na ụdị ọchụchọ (ọnụọgụ ma ọ bụ ọdụ ogologo, n'etiti ụfọdụ kachasị mkpa).
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ngwa nke ecommerce na mpaghara egwuregwu